SingForYou.net - Amyel Tann Minn Shi Tal
Tags : 124-Amyel Tann Minn Shi Tal-KoBurma
By : KoBurma on Jan 10, 2010
Amyel Tann Minn Shi Tal's Description
ဒုတိယ တပုဒ်အတွက် ... ပထမဆုံး အနေနဲ့SFU ရဲ့မမကြီး တယောက်ဖြစ်တဲ့ မမကြီး ဇီဇဝါ ကို ဖိတ်ခေါ်ပါတယ် .... နောက် ညီမလေး Paradise နဲ့ညီမလေး YellowNavy ကို ဖိတ်ခေါ်ပါတယ် .... ညီမလေး YellowNavy ကိုနောက်ဆုံးမှဖိတ်ခေါ်ပေမယ့်သူက တင်ဇာအော် ဆိုတော့တင်ဇာမော့်စတိုင် ပေါ့ ပေါ့ပါးပါး ဝတ်ဆင်ထားပြီး သွက်လတ်စွာ နဲ့ ဆိုချင်စိတ်တွေလောပြီး စင်ပေါ်ကို လွှားခနဲ လေအဟုန်နဲ့ ရောက်လာပါတယ် ( ဂျိမ်း ***** ဂျိမ်း ***** ဂျိမ်း ***** ဂျိမ်း ***** ကျွိ ကျွီ ကျွီး .... စင်က ဝါးပိုးဝါး လေးတိုင်ထောင် ပြီး ဝါးကဒ် ခင်း စပါယ်ရှယ်စင်ဖြစ်လို့တင်ဇာအော် ရဲ့ဒါဏ် ကို မခံနိုင်လို့ အသံထွက် ဆန္ဒပြပါတယ် ။ ခေတ်မီစင်ကြီးဆောက်နိုင်ပါသော်လည်း " ဝက်ဝက်ကွဲ အောင်မြင်အောင် ဝါးစင် နဲ့ ဖြေဖျော်ပြီးဝါးစင်ကျိုးကျဝါးလုံးတွေကွဲအောင် သောင်းကျန်းရမယ်လို့ " အဘ ဘိုးတော်က အမိန့် ရှိထားလို့ ပါ) ... သူ့ နောက်မှာတော့ညီမလေး Paradise က အရင်စင်ပေါ်ရောက်အောင်ကြိုးစားပါသော်လည်း သူက ဖြူဖြူကျော်သိန်း စတိုင် ပိတ်တအုပ်လုံးကုန်အောင်ချုပ်ချင်သလို စိတ်ကူးပေါက်သလို ချုပ်ထားတဲ့ဂါဝန် တထွေးကြီးကို မနိုင့် တနိုင် မ နေရတာက တကြောင်း ထမင်းအုပ်ဆောင်းက ဇာပုဝါကို စတိုင်သစ်အနေနဲ့ ခေါင်းမှာ ခြုံထားရလို့ မြင်ကွင်း မရှင်းတာက တကြောင်း ကြောင့် စင်ပေါ်ကို ဒုတိယ ရောက်လာပါတယ် ။ မမကြီး ဇီဇဝါ ကတော့မမကြီး ဆိုတော့မမကြီး မီမီဝင်းဖေ စတိုင် ခြေတလှမ်း ကုဋေ တသန်း ခြေလှမ်းနဲ့ .... မဟုတ်ပါဘူး နင်ဂျား တွေလို စင်ပေါ်ကို တလှမ်းတည်းနဲ့ ရောက်အောင် ကီသွင်း အားယူပြီး ခုန်တက်လို့ နောက်ဆုံးမှရောက်လာပါတယ်။ ကဲ မမကြီး ညီမလေးတို့ရေ ဒုတိယ တပုဒ် နေနဲ့"အမြဲတမ်မင်းရှိတယ်" ဆိုတဲ့သီချင်းလေးကို အကောင်းဆုံး သီဆို လိုက်ကြရအောင် ဗျား့း့းးးး .... မချော ၃ယောက် ကိုယ်တယောက် ပြောမှာစိုးလို့တားမဆိုတော့ဘူး
ngwezawaung1 on Jan 13, 2010 0
seven on Jan 11, 2010 0
~~~hahahahaha..yee ya tal..Description ka...:)))))))))) so htar tar tawe lae'ayann kg par tal....*****:)~~.
maryaung on Jan 11, 2010 0
wowwwww.. so goodddddddddd....
zezawar on Jan 10, 2010 0
ဟဲ့ပလုတ်တုတ်!!!!!!!!!ဘီလိုဖစ်ဒါဒုန်းအဘရေ...ကိုယ့်အသံကြီးထွက်လာတော့လန့်ဖျန့်ထခုန်မိပါတယ်...(နင်ဂျာများလို) ခောတ်ပေါ်တက်နိကွိတွေကိုဘိုးတော်ဘုရားလက်ထက်ကဘွားတော်လိုက်မမှီနိူင်တော့ဘူး...:P:P:P ဟုတ်ကဲ့..ခုလို Koburma ရဲ့ SFU မှာသီချင်းဆိုသက်တစ်နှစ်ပြည့်မြောက်နှစ်ပတ်လည်အခမ်းအနားမှာခနော်ခနဲ့ကျိုးတို့ကျဲတဲ Bamboo Stage ပေါ်ကီသွင်းခုန်တက်ဂုဏ်ပြုချီးမြင့်ခွင့်ရလို့ဝမ်းမြောက်ဂုဏ်ယူမိပါတယ်...:D:D:D (နောင်များအခါအခွင့်သင့်လို့ဂုဏ်ပြုရမယ်ဆိုရင်ဖြင့် stage ခိုင်ခိုင်ဆောက်စေချင်ပါတယ်..ကီသွင်းခုန်တက်ရတော့စင်ကျိုးမှာကြောက်လို့ပါ) Thank you for unexpected creation!!!!!!!!!5 stars for brilliant idea and wonderful creation!!!!!!!!!*****:):):)
thant on Jan 10, 2010 0
super brain par bal ko burma.......desc..read pye lal yi ya lite tar......athit asan tin sat mhu lay htway nae......sfy ka bro & sis htway ko phyaw phyay tar......amyarr gyi thanks par.......sis3yout yae aso ka lal kg pye tharr par......******
whitekisslay on Jan 10, 2010 0
A hek hek..:p memee elo pyaw taw par buu...so par Ako Burma yaee...mama chaw chaw layy tayy ye voice lay pe hear lite tal..be ko phyit ya tar tone???......Ayann kaung aung thee so twer tal group singgsss lay par****************naw all:)
aungminhtun on Jan 10, 2010 0
Wow, great job guys! Very very creative! Thanks for entertaining all of us!
hippo on Jan 10, 2010 0
wow another great one . . .Clap Clap Clap . . . **************!!!! for all sissssssssssss
Ilovemusic on Jan 10, 2010 0
အဟီး..ဒါကတော့...မချောသုံးယောက်...မိုက်လုတဲ့ ပွဲပေါ့ဗျာ....မချောသုံးယောက်..မိုက်တလုံး....ဟီးဟီး...အားပေးသွားတယ်....ပွဲအပြီးမှာ...ကိုဘားမားကြီးက...မိုက်အသစ် လျော်ပေးလိုက်ရပါတယ်...လုကြတာ ပျက်သွားလို့....ဟီးဟီး....။
liontun on Jan 10, 2010 0
ဆိုထားတာကတော့ ရှယ်ပါပဲဗျာ အမြဲတမ်းအဆိုကောင်းတဲ့ အတွက်*****************ပါပဲ :)
turikimuriki on Jan 10, 2010 0
another fantastic singing again..... waiting4more .....3of u sang really great ... nice presentation , ko burma.... 5*
myobala on Jan 10, 2010 0
ဒီသီချင်းလည်းအရမ်းကောင်းတယ် .....ကျွန်တော်များပါမလားလို့ နားထောင်ရတာ အမော......တော်တော် မျက်နှာလိုက်တဲ့မြို့စားကြီးပဲ.......ချစ်တော့ဘူး...ဟွန်း.....ဟဟဟဟ
khaki on Jan 10, 2010 0
I really glad to hear this song. You are the great performance in SFY . I like is so much. I am so appreciate about ur bright talent. Even i cant amaging sabout how did u got this kind of idea. You are so great. And the rest all the singers are so nice vocal. The same thing is that, they are so popular in SFY. So i likely to say thank u for sharing great song to all of us <SFY member>. thank u I am KHAKI so happy to beamember of sing for you...
tharnge123 on Jan 10, 2010 0
har Ako gyi, Mite tal byar, Phan tee chat ka taw lan tal. Main ka lay tway gyi bel lar Ako gyi ya, Youte kyar lay tway yaw par bu lar? Desc yay htar tar lelamite sar gyi, Tha chin ka lelamite sar gyi, phan tee mu ka lelamite sar gyi, Good tal byar, Million stars for Ako gyi Ba khet KoBurma.************************************************************
yellownavy on Jan 10, 2010 0
CONGRATULATIONS ON YOUR SFY ONE YEAR ANNIVERSARY! မြို့စားမင်းကြီး ဘာလို့ကျန်နေခဲ့တာလဲ? အမှတ်တရပိုဖြစ်သွားအောင် ဝင်ဆိုလိုက်တာမဟုတ်ဘူး ဟီးဟီး ... Description ကတော့ မိုက်သလားမမေးနဲ့ ...အနည်းဆုံးဆယ်ခါလောက်တော့ ပြန်ဖတ်ပြီးပြီ။ အခုလိုပါဝင်ခွင့်ပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ် မြို့စားမင်းကြီး ... ကြယ်ပွင့်များလည်း ချီးမြှင့်သွားပါတယ် ... ပုံ တင်ဇာအော်
အာကျယ်လေးရေ....you are always on my mind လို့ နောက်ဆုံး အော်လိုက်တာလေးပိုကြိုက်တယ်ဟေ့....ဟိဟိဟိဟိ..
sch7677009 on Jan 10, 2010 0
my dear bro gyi myar sing htar ter lar lo...bae thu pae sing sing kaung ter bae...
winwinthant on Jan 10, 2010 0
အိုး မိုက်တယ် သုံးယောက်လုံးကောင်းမှကောင်း ဒီနေ့ဒီသီချင်းကိုအခုပဲရကော့လုပ်တာမရဖြစ်နေလို့ မဒီသုံးယောက်လုံးအတွက် စတားများ လာပါပြီ *****************************************
paradise on Jan 10, 2010 0
That was extraordinary in mixing .....Great Idea KoBurma......i was speechless to say thanks to you...Now we, 3sisters in one song....So warmly to think of that...and TKs so much for your Joke......Great Program....Well entertain for SFY........I love it..:)))))))))))
susannyunn on Jan 10, 2010 0
hahhahahahha:))))hehehehhehe:))) yay htar tar tot,,,,myat lone hte mar kwint kwint kwat kwat pelz chint........aheeeeeee......mite te byooooooooo..aseasin lay tay ka tot... dar ka totaseasin no2popz naw.....hut par p,...ayan nit tat te song lay ko... jit khin ya par taw.....jit mama mar tee sho thwar kya tar.... nar sin ya tar kyi nuu wan tar mi par te.... se sin te uncle oxygen g ko lelz kyay zuuahtoo par.... descriptionayan ye ya te.... web cam lay nelz so po kg melz chint......aheeeeeeeeeeeeee:)))) million starz for mama myarrrrrrrrrrrrrr....>>>>>>>>>>
KoBurma on Jan 10, 2010 0
ညည်းနဲ့ လဲ ဆိုချင်သေးတယ် အချိန်ရရင် ... ဟက်ဟက်ဟက်စ် ...